Sidee Sunaamku asal ugu yahay | Saadaasha Shabakadda
Tsunami ka dhacday Indonesia, 2004
Mawjadaha waaweyn, kuwa mararka qaarkood soo ifbaxa dhulgariir ba'an ka dib, waxay umuuqdaan wax ka soo baxay filim aakhiro. Dhacdadan saadaasha hawada ayaa sababa dhaawac weyn Xeebaha, wax walba oo jidkiisa ku jira ka qaad.
Maanta waan arki doonnaa sida Sunaamigu u unko, iyo waddamada ay aadka khatarta ugu yihiin inay noqdaan "xulashada" xaaladaha mowjadaha dekedda, sida looga yaqaan waddanka Japan.
Sunaamis waa hirar waawayn oo dhex mari kara 7 iyo 33 mitir Dheer Mararka qaarkood waxay soo baxaan dhul gariir ka dib, ama uu sababo dhulgariir ama qarax folkaane ah. Markuu dhulgariirku hoos u dhaco badda hoosteeda, biyaha dusha sare waxay kor u qaadaan dhowr mitir, iyagoo u dhaqaaqaya dhanka xeebta oo saameyn ku yeelanaya dhulka.
Kuwani waa ifafaalooyin, burburkooda dartiis, saynisyahannadu waxay rajeynayaan inay awood u yeelan karaan inay ka hortagaan ka hor, maxaa yeelay maanta weli way ku adag tahay iyaga. Weli, mahadsanid horumarka degdegga ah ee tikniyoolajiyadda, waxay ku sii dhowaanayaan una sii dhowaanayaan gaadhitaankeeda. Way u adeegsadaan seismographs, kuwaas oo diiwaan geliya astaamaha kala duwan (xoojinta iyo mudada, iyo kuwa kale) ee gariirka dhulka ee uu soo saaray dhulgariir; sidoo kale dayax gacmeedyada muujinaya sawirada badaha.
Sawirka: Maamulka Badweynta iyo Cimilada Qaranka (NOAA)
Dalalka ugu badan ee tsunamis-ka ay ka soo bilowdaan waa kuwa ku yaal waxa loogu yeero Badbaadada Baasifiga ee Dabka, taas oo ah, in: Japan, Australia o Hawaii. Wadamada sideena oo kale, Spain, khatartu aad ayey uga yartahay, si kastaba ha ahaatee, kama dhaafey khatarta: Nofeembar 1, 1755, Cádiz iyo Huelva waxay la kulmeen cawaaqibkii duufaan ba'an oo ka tagtey 1240 dhintay, ka dib dhulgariir u dhexeeya 8 iyo 3 oo ku saabsan miisaanka Richter ee ku dhacay Lisbon. Waa run in ka badan laba qarni in laga joogo dhacdadan foosha xun, laakiin cawaaqib xumada ka dhalata tsunami awgeed, saynisyahannadu waxay rajaynayaan inay yeeshaan nidaamka digniinta lacag caddaan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Sidee tsunami u bilaabmaa
niyada maryel dijo
Waan jeclahay, laakiin waxaan u baahanahay sida ay asal ahaan u yihiin waxna ma dhahaan meelihii dhacay wax badan ima qancinayaan laakiin way i caawisay aad baan u mahadsan yahay
Jawaab mooral mooyee